Apple inodambura tambo yeApple Watch uye ndokuisiya mumita | Ndinobva mac
Apple inodambura tambo yeApple Watch uye ndokuisiya mumita
Chimwe chezvinhu zvakanyanyisa kubata vashandisi izvo kusvika parizvino vari kunakirwa neApple Watch, iri kuvhura bhokisi kuti uone sezvo tambo yejaja yedhijitari yaive mamita maviri, kureba kunokwana kukwana kuti tikwanise kubhadharisa Apple Watch yedu tisingatye kuti kumwe kupesana kana kudhonza tambo kungaite kuti iwire pasi.
Asi nekuvhurwa kweApple Watch Series 1 uye Series 2, iyo Cupertino-yakavakirwa kambani yakafunga kuti iyi tambo yakareba uye yakaipfupisa, ichisiya iyo chete mita yakareba. Kwete zvakanyanya kwete zvishoma, mita imwe ichiri ipfupi tambo yekumutsiridza chero chishandiso, uye mamita maviri akareba zvakanyanya. Imamita nehafu ichave iri urefu hwakafanira, asi zvinoita sekunge Apple kwete.
Nekudzikisa hafu tambo yeApple, uri kuchengetedza chikamu chakakosha chemutengo weiyi tambo, nekuti zvinotora hafu tambo asi inoisa iyo Apple Watch mune ine njodzi mamiriro, kunyanya kune vashandisi. vashandisi vasina chokubuda padhuze nehusiku hwavo uye vanga vajaira waya iyi.
Asi hausi iwo chete musiyano watiri kuzowana mumhando nyowani dzeApple Watch, sezvo kambani iri kutanga kuita mutsauko maererano nemidziyo iyo mudziyo wega wega unotipa. Kunyange iyo Series 2 modhi ichitipa charger, ingangoita 5W senge iyo iPhone, iyo Apple Watch Series 1 haina charger, saka isu tichafanirwa kuita mutsara wekuchaja chishandiso kana isu tisingade kuenda kuburikidza neApple Chitoro uye kubhadhara iyo 19 euros iyo charger inodhura.
Kufamba kusinganzwisisike zvisinei nekuti unotarisa kupi nekuti inogona kunge iri mari diki kwazvo kune iyo kambani sanganisira mudziyo uyu mubhokisi. Ini handifunge kuti chinangwa chake ndechekuti vashandisi vabhadhare zana mairi uye kuwana Apple Watch Series 100, iyo inouya nechaja nemidziyo yese inoenderana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inodambura tambo yeApple Watch uye ndokuisiya mumita
Handizive kuti sei uchitaura kuti chaja haina kuiswa muChikamu 1. Kana iwe ukaraira kubva kuchikumbiro, zviri mune zviri mubhokisi
Mukutsanangurwa kwezviri mukati meiyo Series 1 bhokisi isu tinogona kuverenga: 5 W USB simba adapter (inosanganisirwa chete neApple Watch Series 2)
Warevesa. Asi kana ndichitaura nezvehurefu hwetambo ndaifunga kuti waireva charger kwete plug. Ndine urombo nekusanzwisisa
Hapana chinoitika munhu. Ini ndiri wekutanga kukanganisa kakawanda.
Tsvaga iyo nyowani Beats Solo3 Wireless yakaunzwa neApple
Apple inoshanda pa "yakakwana" isina waya kuchaja iyo iPhone 8